FBC - Daandileen xiyyaaraa imaltootaa qilleensa irratti tajaajila intarneetii kennan dabalaa dhufaniiru; kun akkamitti danda’ama?
Daandileen xiyyaaraa imaltootaa qilleensa irratti tajaajila intarneetii kennan dabalaa dhufaniiru; kun akkamitti danda’ama?
Finfinnee, Gurraandhala 14, 2010 (FBC) Daandileen xiyyaaraa tajaajila intarneetii duumessaan olitti kan akka feesbuukii ilaaluu, i-meelii barreessuu yookiin fiilmiiwwan agarsiisuu kennan dabalaa jiru; dheerina sa’aatiiwwanii fi saffisa gara-garaan.
Haata’u malee, intarneetiin (internet signal) xiyyaara qilleensa irra jiru fi lafa gidduu akkamitti darbuu danda’a?
‘Anteenaan’ duubbee xiyyaaraa irra kaa’ame saatalaayitii isatti dhihaatu waliin wal-quunnamsiifamee intarneetii xiyyaara keessatti fayyadamuu dandeessisa. Kanaaf Saatalaayitoonni ‘Geostationary” faayidaarra akka oolan Luftaanzaa Teknik irraa Steefan Bark ni- ibsu. Saatalaayitoonni kunniin buufataalee lafarraa gara-garaa irraa ‘signaalii’ dabarsu.
‘Siignaalonni’ kunniin jalqaba ‘sarvarii’ qabxii intarneetii funyoo hin-qabnetti isaan dabarsuun wal-quunnamu. Kunis akka mi’a Wi-Fi mana keessaa quunnamsisuutti tajaajila. Haala kanaanis imaltoonni taabletota, bilbiloota ismaartii fi laptooppii isaaniin intarneetii argatu.
“Kanaaf imaltoonni yeroo mara intarneetii fayyadamuu danda’uu?” gaaffiin jedhu ka’uu danda’a; kunis, teeknoolojii xiyyaarichi fayyadamee fi eyyama abbootii-taayitaa ‘tiraafikii’ qilleensaa irratti hundaa’a.
‘Konneekshiniin’ baay’ee si’ataa xiyyaaraa fi saatalaayitii gidduus samii qulqulluu duumessa hin-qabne irratti yookiin duumessaan olitti akka argamu Baarak himaniiru.
Oduuwwan Biroo « 'Baatiriiwwan' konkolaataa elektirikii fooyyeffamaa jiru	Sa’aatin waggoota kuma 10f tajaajila laatu hojjetamaa jira »